ZESN Inoti Mauto Haafaniri Kushandiswa Munyaya dzeSarudzo
Mashoko anonzi akataurwa negurukota rinomirira dunhu reMasvingo, VaJosiah Hungwe, pamwe chete nechipangamazano chemutungamiri wenyika, VaChris Mutsvangwa, ekuti bato riri kutonga reZanu-PF richashandisa mauto mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya, ari kushorwa zvikuru neveruzhinji.
Mumwe wevari kushoropodza mashoko aya ndisachigaro weZimbabwe Election Support Network, ZESN, VaAndrew Makoni.
VaMakoni vanoti zvekushandisa mauto mukutsvaga rutsigiro hazvisi pamutemo, uye pane mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo inofanirwa kuvandudzwa kana nyika ichida kuita sarudzo dzakachena uye dzisina mutauro gore rinouya.
“Kuti sarudzo yegore rinouya iitwe zvakanaka, tinofanira kuve ne voters’ roll itsva, munoziva kuti pane chirongwa cheBVR chirikuitwa nguva ino, chinonzi chingangopamidzirwa mazuva, saka tinofanira kuva tine voters’ roll itsva uyezve tinofanira kuvatagadzirisa mitemo inechokuita nesarudzo uye nemitemo inongombundikidza kodzero dzevanhu,” VaMakoni vanodaro.
Vanoti kana vanoita zvematongerwo enyika vaine chido chekugadzirisa zvinhu, nguva yacho ichiripo yekuzvigadzirisa.
Panyaya yasachigaro weZimbabwe Election Commission, ZEC, VaMakoni vanoti havasati vanzwa kuti sachigaro uyu achadomwa riini asi vanokuridzira hurumende kuti ikurumidze kuwana sachigaro weZEC vachiti pane basa rakawanda rinofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa.